Noocyo casri ah oo jiinis iyo funaanado lagu dalxiis tago magaalada | Bezzia
Noocyo caadi ah oo leh jiinis iyo funaanado si ay magaalada ugu soo wareegaan
Maria vazquez | 03/05/2021 18:00 | Maxaan xirtaa
Jeansadu waa saaxiib weyn marka abuuro dhar caadi ah waxay ku saabsan tahay Ku dhowaad dhammaanteen waxaan ku leenahay ugu yaraan hal joonis oo jiinis ah dharkayaga, kuwanna waxaa had iyo jeer jira labo ka mid ah oo aan ku sharraxno marka aan raadineyno raaxada ugu badan.
Kuwaasna jiinis kaa dhigaya inaad dareento raaxo, Heerarka oo dhan, waad dib u abuuri kartaa nooc kasta oo ka mid ah qaababka aan maanta soo jeedineyno. Hababka ugu habboon maalmahaas marka aan ka baxno guriga qorshe la'aan ama markaan ka warqabno inaan u safri doonno qayb ballaaran oo magaalada ka mid ah.
Hadana hadaan ka hadalno qorshooyinka la hagaajiyay iyo socod dheer, ma jiro qalab na siinaya nasteex ka weyn in yar T-shaati ama kabo isboorti. Hadda haddaan horeyba u helnay kalabar qaabkeenna la diyaariyey. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad sameyso waa xulashada dusha sare.
Guga a shaati ama funaanad aasaasi ah waxay noqdaan xulasho weyn. Shaati cad waa mid aasaasi ah oo aan ku dari karno labadaba dharka caadiga ah sida kuwa aan maanta abuureyno iyo sidoo kale kuwa kale ee rasmiga ah. Haddii aad sharad ku gasho shaati, u samee mid cad ama madow si aad u abuurto dhar fudud oo aadan waligaa ka daalin.
Subaxdaas ama habeenada qabow, dooro a jaakad ama jaakad gaagaaban inuu kaa caawiyo inaad la dagaalanto dhaxanta. Haddii aad u socoto dharka aasaasiga ah si aad u abuurto muuqaal fudud, abuur farqiga midabka u dhexeeya jaakadda iyo shaati si aad ugu darto xiisaha ay u leedahay.
Iska ilow dharka aasaasiga ah haddii aad rabto inaad soo jiidato dareenka qayb gaar ah oo ka mid ah dharkaaga. Dusha sare oo daabacan ama faahfaahinta isbeddelka sida silsilado waaweyn ama gacmo-qabad mug leh waxay ka dhigi doontaa indhaha oo dhan inay midkaan midkood ku eegaan.
Miyaad sidoo kale marar badan isticmaashaa isku darka jiiniska iyo dharka xeebta si aad u abuurto dhar caadi ah?
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » fashion » Maxaan xirtaa » Noocyo caadi ah oo leh jiinis iyo funaanado si ay magaalada ugu soo wareegaan
Sida loogu bedelo musqushaada habka ugu fudud
Waxyaabaha lagu beddeli karo si loo sameeyo hilibka khudradda la dubto